Mineralogy: ihe ọ bụ, ihe ọ na-amụ na etu ọ dị mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
La ihe omimi ọ bụ sayensị sitere na geology na-elekwasị anya na ọmụmụ na njirimara nke mineral. Otu mineral bụ ihe ọzọ karịa otu siri ike nke nwere kemịkal kemịkal nke anaghị edozi. O nwekwara usoro atumatu a haziri ahazi ma weputara ya site na usoro ihe ndi ozo.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ọmụmụ ihe gbasara ahụike na mkpa ọ dị na ọkwa sayensị.
2 Ngwunye nke Ngwa
3 Agbanwe na mineralogy
3.4 Specific ibu
Ka oge na-aga, e nweela ọkwa dị iche iche nke mineral mana ọ bụ kemgbe etiti narị afọ nke iri na itoolu mgbe ihe mejupụtara kemịkal bụ isi njirisi maka nhazi ha. A na-ekewapụta ihe ndị dị ka ụgbọ elu ma ọ bụ ìgwè ndị anionic na-achịkwa na mmiri ọgwụ ha. N'ụzọ dị otú a, anyị anaghị ahụ klaasị akọwapụtara ihe gbasara mineral nwere ihe ndị yiri ya. Dịka ọmụmaatụ, otu njirimara nke nwere ike ịdị ka otu ma ọ bụ karịa otu mineral bụ eziokwu na ha na-eme n'otu ụdị nkwụnye ego.
Isi klaasị a hụrụ na nkà mmụta ọgwụ bụ:
Ihe ndi ala
Sulfides na sulfosalts
Oxides na hydroxides
Na ihe omumu, ihe omuma bu ihe aru. Achọpụta mineral na-eme na visu. Ọ bụ maka ịmata mineral na ntinye aka. Ọ bụ ezigbo ihe ọrụ bara uru n'ọhịa nke ọkà mmụta banyere ala, ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere mbido izizi maka ụdị akụrụngwa a na-ahụ anya. Ka anyi ghara ichefu na o nwere okwute nke otu mineral.
Ngwunye nke Ngwa
Ihe dị mkpa eji visu mineralogy maka njirimara ịnweta bụ iko dị ebube, obere aguba ma ọ bụ faịlụ, magnet, na ntuziaka ịnweta. Njirimara nke mineral bụ ndị a ga-amata site na nyocha dị mfe ma ọ bụ site na nnwale dị mfe.
Ihe mbụ ị lere anya banyere ịnweta bụ ọdịdị ya. Anyị nwere ike ịhụ mmepe nke ihu ihu kristal nke ịnweta. Ọ bụrụ na anyị achọpụta mineral nke ọma kristalized anyị nwere ike ịhụ na ọdịdị ya na mpụga ya bụ njiri ihu nke na-etolite otu polyhedron. Dabere na ụdị polyhedron a na njirimara njirimara nke ihu, anyị nwere ike ịhọrọ ụdị ịnweta anyị ga-enwe. Nke a bụ ihe dị mkpa njirimara na njirimara gị. Ka anyị nye otu ihe atụ: mgbe anyị hụrụ pyrite na galena anyị nwere ike na-edebe prisms na a hexagonal isi na aragonite, rhombohedra na calcite, wdg Agbanyeghị, ọ bụ ihe zuru ebe niile na mineral enweghị ike ịzụlite ihu ọma n'ihi ọnọdụ ha na-eto eto. N'okwu ndị a, a na-akpọ kristal dị ka allotriomorphs.
Ihe nke abuo nke achoputara na visu mineralogy bu agwa. Ọ bụ nkwalite nke ntọala nke kristal. Nke a metụtara kristal abụọ n'otu n'otu, ngwakọta crystalline. Enyemaka nke otu omume ma ọ bụ ọzọ na-adabere na ọnọdụ uto nke ịnweta. Ọ bụrụ na anyị nwere ịnweta nke ejirila ngwa ngwa jụọ oyi, dịka ọ nwere ike ime na nkume mgbawa, anyị nwere ike ịhụ kristal kpụrụ kpamkpam. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị nwere nkume nke jụrụ oyi ya na-aga n'ihu nke ọma, anyị nwere ike ịchọta mkpokọta kristal kristal.
Agbanwe na mineralogy
Agba nke ịnweta nwere ike ịdị iche iche. Ihe kpatara ya inwe otu agba ma ọ bụ ọzọ nwere ike ịbụ maka ebumnuche dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ na-abụkarị n'ihi ọnụnọ nke ụfọdụ ihe akpọrọ chromophores dịka iron, chromium, cobalt, copper, wdg. Ọ bụ otu n'ime mgbanwe dị mkpa mgbe ị na-ekpebi ụdị ịnweta. A na-eji agba dị iche iche eme ihe n'ime ihe omimi iji chọpụta mineral ndị a.
Ekwesiri iburu n'uche na n'ọtụtụ oge, a na-agbanwe elu nke mineral site na ịdị adị nke ụfọdụ adịghị ọcha ma ghara iwepụta agba mbụ.
Eriri bụ ihe na-agbanwe agbanwe nke a na-amụ dị ka a ga - asị na ọ bụ agba nke eriri. Ọ na-ezo aka na agba nke ịnweta na-ewe mgbe ọ gbanwere. Mkpebi nke eriri a na-eme site na ịchacha ya na mineral na efere posili na-adịghị mma. Ozugbo emere nke a, a hụrụ agba nke ahịrị ahụ. Eriri ndị nwere agba akọwapụtara ma sie ike ga-abụ nke mineral dị egwu dịka sulfides.
N'aka nke ọzọ, mineral ndị na-abụghị nke dị ka silicates ma ọ bụ carbonates ga-enwe akara ọcha ma ọ bụ ezigbo ọkụ.
Ihe na-egbuke egbuke bụ ọdịdị nke ịnweta mgbe ọkụ dara na ya. Nke a gloss nwere ike ịbụ ọla, sub-metallic na-abụghị nke. Ngwurugwu ọla na-adịkarị na mineral nke na-enweghị ihe ọ bụla ma nwee ndepụta ntụgharị dị ala karịa 3. Dịka ọmụmaatụ anyị nwere pyrite, galena, ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha. N'aka nke ọzọ, anyị nwere luster na-abụghị nke ọla nke na-ahụkarị nke mineral ndị nwere mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe dị ala karịa 2.6.
N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ ụdị nchapụta dị iche iche: diamond luster, vitreous, resinous luster, mmanu mmanu luster, pearly luster, silky, wdg
A pụkwara ịtụ ike ndọda a kapịrị ọnụ dị ka otu njupụta nke ịnweta yana ọ bụ mmekọrịta dị n'etiti ibu na ịdị arọ nke olu ruru ogo mmiri 4. Iji ghọta nke a, anyị ga-enye otu ihe atụ. Ọ bụrụ na a ọ drinkụ toụ ka sere kpọmkwem nnukwu mpo hà 2 anyị nwere ike ikwu na a nyere sample nke kwuru ịnweta ji okpukpu abụọ karịa ihe hà olu nke mmiri ga-itu.
Nke a kapịrị ọnụ ibu ibu kpebisiri ike site mejupụtara na bụ mgbe niile. Ya mere, ọ na-aghọ mgbanwe dị oke mkpa maka njirimara. Ka anyị ghara ichefu na maka nchịkọta ihe omimi, na visu, a na-eme mkpebi nke ike ndọda a kapịrị ọnụ nke ịnweta, mana ọ ga-ekwe omume ịkọ njupụta ya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mineralogy.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Mkpụrụ ọgwụ